China Okwunyere Umu Ohu China Manufacturers & Suppliers & Factory
Okwunyere Umu Ohu - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Okwunyere Umu Ohu)
Mee ka 80W rụọ ọrụ na-arụ ọrụ na oge nwa oge
Ọrụ a na-arụ ọrụ dị iche iche a na-arụ ọrụ ọtụtụ dị arọ na ụdọ ike 10ft nke na-ekwe ya maka nkwụsị ọsọ ọsọ na ọhụụ dị mfe. Ma ọ dịghị achọta ọ bụla, n'ihi ya ọ dịghị mkpa na onye ọrụ ahụ ịdọrọ nnukwu ụlọ ndị na-agba ballast gburugburu. Ogologo oge iri asatọ na asatọ anyị na- arụ ọrụ na-eme ka ọ dị ngwa ma dị mfe...
100W Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị ka 100W
Nke a 100W Led String Work String bụ kpam kpam na-anọchi 300W ọkụ ọkụ, na-echekwa ruo 80% na gị ọkụ eletrik. Ogologo oge anyị na- arụ ọrụ na-ejikọta ngwa ngwa site na ntinye nkwụnye na ụdọ ike jikọtara ya na plọg, na-ahapụ gị ka ị jikọọ na ọtụtụ ọkụ na-echekwa plọg. IP65 waterproof (ọbụna akụkụ nkwonkwo) na-eme ka ọrụ...
100W mere ka ìhè rụọ ọrụ nwa oge
100W Nwa Oge Ihie Ọrụ Ìhè 13000Lm 5000K
100W Nwa Oge Ihie Ọrụ Ìhè 13000Lm 5000K Nke a 100W Led Work Lights bụ ihe zuru oke na-agbanwe maka 300W ọkụ ọkụ, na-echekwa ruo 80% na ụgwọ ọkụ eletrik gị. Ọrụ anyị na- adịru nwa oge A na-ejikọta ọkụ dị iche iche site na ntinye nkwụnye na ụdọ ike jikọtara ya na plọg, na-ahapụ gị ka ị jikọọ na ọtụtụ ọkụ na-echekwa...
100W High Bay LED Nwa Oge Ọrụ Light Ngwunye
100W High Bay LED Nwa Oge Ọrụ Light Ngwunye Osisi a dị elu mere ka ìhè rụọ ọrụ bụ ngbanwe zuru oke maka oriọna ọkụ 300W, na-echekwa ruo 80% na ụgwọ ọkụ eletrik gị. Ọrụ anyị na- adịru nwa oge A na-ejikọta ọkụ dị iche iche site na ntinye nkwụnye na ụdọ ike jikọtara ya na plọg, na-ahapụ gị ka ị jikọọ na ọtụtụ ọkụ...
150W Egwuregwu Dịrị Dịrị Ọhụụ Ọrụ Light Fit
150W Egwuregwu Dịrị Dịrị Ọkụ Oge Ọhụụ Na-enwu ọkụ Osisi a dị elu mere ka ìhè rụọ ọrụ bụ ngbanwe zuru oke maka oriọna ọkụ 300W, na-echekwa ruo 80% na ụgwọ ọkụ eletrik gị. Ọrụ anyị na- adịru nwa oge A na-ejikọta ọkụ dị iche iche site na ntinye nkwụnye na ụdọ ike jikọtara ya na plọg, na-ahapụ gị ka ị jikọọ na ọtụtụ ọkụ...
150W Ọhụụ na-adịru nwa oge na-enye ìhè
150W Ọhụụ na-adịru nwa oge na-enye ìhè Osisi a dị elu mere ka ìhè rụọ ọrụ bụ ngbanwe zuru oke maka oriọna ọkụ 300W, na-echekwa ruo 80% na ụgwọ ọkụ eletrik gị. Ọrụ anyị na- adịru nwa oge A na-ejikọta ọkụ dị iche iche site na ntinye nkwụnye na ụdọ ike jikọtara ya na plọg, na-ahapụ gị ka ị jikọọ na ọtụtụ ọkụ na-echekwa...
Hook Wụnye N'ihi na 150W arụ ọrụ ọkụ ọkụ
Hook Wụnye N'ihi na 150W arụ ọrụ ọkụ ọkụ Mmiri a dị elu na-eduba ìhè ọrụ bụ ngwụcha zuru oke maka oriọna ọkụ 300W, na-echekwa ruo 80% na ụgwọ ọkụ eletrik gị. Egwuregwu ọrụ ọrụ 150W anyị nwere ike ijikọta ya na ntinye nkwụnye na ụdọ ike jikọtara ya na plọg, na-ahapụ gị ka ị jikọọ na ọtụtụ ọkụ na-echekwa plọg....
Elu Bay na-arụ ọrụ nwa oge ọkụ 150W
Elu Bay na-arụ ọrụ nwa oge ọkụ 150W <Ọdịdị Ekebeghi Agbanwe Agbanwe > : Nke a mere ka ìhè ọrụ 150W dị ngwa ma dịrị mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye agbatị na nchebe iji kpochapụ ihe ize ndụ nke iko dị nro agbajiri. <Super...
80W Ọhụụ na-arụ ọrụ nwa oge 10400Lm
80W Ọhụụ na-arụ ọrụ nwa oge 10400Lm <Ọdịdị Echeghị Agbanwe Agbanwe > : Nke a mere ka ìhè ọrụ 80W dị ngwa ma dị mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye agbatị na nchebe iji kpochapụ ihe ize ndụ nke iko dị nro agbajiri. <Super...
10400LM 5000K 80W Led Work Light Fixtures
10400LM 5000K 80W Led Work Light Fixtures <Ọdịdị Echeghị Agbanwe Akpọrọgwụ > : Nke a na- arụ ọrụ ọkụ ọkụ 80W bụ ngwa ngwa ma dị mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye agbatị na nchebe iji kpochapụ ihe ize ndụ nke iko dị nro...
130lm / w 5000K 80W na-eduzi bọlbụ ọka
130lm / w 5000K 80W na-eduzi bọlbụ ọka <Ọdịdị Echeghị Agbanwe Agbanwe > : Nke a 80W na-ebute ọkụ ọkụ ọrụ na-adị ngwa ma dịrị mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye agbatị na nchebe iji kpochapụ ihe ize ndụ nke iko dị nro agbajiri....
50W Umu Mmiri nke Na-enwu na Mmiri nke Mmiri
50W Umu Mmiri nke Na-enwu na Mmiri nke Mmiri N'abalị, IP65 50W na-eduzi ìhè anyanwụ ga-agbanwe na-akpaghị aka ma na-enwu gbaa ọkụ na-acha ọkụ ọkụ site na mpempe mmiri mmiri ozuzo na-egbuke egbuke nke 140 lumens na ụgwọ zuru ezu. Nke a mere ka ìhè ìhè anyanwụ na -agbanye na-akpaghị aka mgbe anyanwụ dara ma laa mgbe...
50w Uhie Ohu Ogige Uhie Light 6500lm
Bbier 50w Ìhè Uhie Ogige Uhie Light 6500lm bụ nnukwu na-egbuke egbuke na nnukwu lumens irè 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a Ìhè Garden osisi Light 50w nwere ezi heatsink imewe gosiri maka 50000 awa nke ndụ. Nke a Ìhè Garden osisi Light 6500lm dabara MEE 2-3 / 8 inch na 3 inch osisi mfe iji wụnye...
UFO Uhie Ohu 200W 5000K 26000LM
UFO Uhie Ohu 200W 5000K 26000LM 1. UFO High Bay Lighting ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. 5000k ụlọ ọrụ na-eduzi ọkụ bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo...
Okwunyere Umu Ohu Oghere Ugwu Ochie Uzo Egwuregwu Uhie Ohu 75W Umu Ohu Uzo Oghere Ebe Ochie 50W Egwuregwu Ugo Ohu Ugo Mwube Uhie Ochie Nzuzo Enwunye Ndazi N'ihu